Sinoa voasambotra teny Ankazomanga Nifoka rongony no sady nanao trafikana sokatra
Teratany Sinoa iray efa niditra am-ponja no tra-tehaka teo am-pifohana mahadomielina. Nandritra ny fisavana ny toerana nipetrahany no nahatrarana rongony 21,6 g teny aminy ary nahitana sokatra miisa 24 tao anaty gony . 39 taona ity teratany vahiny ity izay voasambotry ny polisy miady amin’ny zavamahadomelina (STUP) Anosy,
afak’omaly 4 martsa, teny Ankazomanga. Resaka fidorohana no niaingan’ny fikarohana. Ny alatsinainy teo, nahazo vaovao ny tompon’andraikitry ny polisy ao amin’ny STUP fa misy teratany vahiny iray midoroka mahadomelina ao amina trano fandraisam-bahiny iray eny Ankazomanga, araka ny fampitam-baovaon’olon-tsotra. Nidina teny an-toerana avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana teny Anosy nijery ny zava-nisy. Teratany sinoa iray no tra-tehaka. Tamin’ny fanadihadiana natao no nahalalana fa efa matihanina amina resaka trafikana sokatra izy ary efa nigadra tamin’io sy fitazonana fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana ny taona 2016. Nalefa eny amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana izy hatao fanadihadiana. Miandry ny tohiny ny mpanara-baovao. Maro ireo mpanondrana tratra fa ny dahalo ambony latabatra ambadik’ireny mpitavandra ny harem-pirenena ireny, tahaka ny mpamatsy, ny mpamoaka, ny mpandray, ny mpanamora ny fanondranana mbola mitoetra ho baraingo hatrany ka mitaky valiny mangarahara.